बझाङ । बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिकामा जीप दुर्घटना भएको छ । नगरपालिकाको सुबेडामा किमतोला छयाला सडक खण्ड मेलमुडामा से १ ज ६९० नम्बरकाे जीप दुर्घटनामा परेकाे हाे । जीप दुर्घटनामा परि रुपक बोहरा र स...
रोशी नदि थुनियो, भल पसेर वस्ती र सडक अवरुद्ध
काभ्रे । असार अन्तिमबाट अति सक्रिय भएको वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोक स्थित पनौती नगरपालिकाको रोशी जोरघट्ट-२ मा पहिरो खसेपछि रोशी नदी थुनिएको छ । पहिरोका कारण नदी छेउमा रहेका वस्तीमा ढुङ्गासहितको भल पसे...
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुयरा ‘गुपचुप’ काठमाडौंमा छन् । त्यहाँको राजनीति र सत्ता सञ्चालनमा शक्तिशाली उनले साथमा ३ जना मन्त्री पनि ल्याएका छन् । शनिबार काठमा...
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसँगै राहतमा जुट्न आयोनको आह्वान
काठमाडौं । असार अन्तिम पश्चात लगातार सक्रिय भएको मनसुनका कारण देशभर बाढी पहिरो साथै कयौं गाउँ प्रभावित भएका छन् । यसै विपदलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) ले देशभरका प्रभावित क्षेत्...
कुलेखानी भरिएपछि ड्याम खाेलिँदै, तटीय क्षेत्र आसपास सचेत रहन आग्रह
मकवानपुर । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम (इन्द्रसरोवर)मा पानीको तह क्षमता भन्दा बढी हुन थालेपछि पानीलाई निकास दिइँदै छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ...
काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका कतिपय भागमा अझै केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । आज देशको मध्य तथा तथा पूर्वी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहेको र पश्चिमी भूभागमा आंशि...
शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न विद्युत् उत्पादन केन्द्र, वितरण लाइन र प्रसारण लाइन क्षतिग्रस्त भएका छन् । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बाढी पहिरोका कारण करिब ६० मेगावाट बराबरका चार जलविद...
आज २०६ औं भानुजयन्ती, राष्ट्रकविको रथ यात्रा
काठमाडौं । आज नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६ औं जन्मजयन्ती । आइतबार नेपाल सहित भारत, भुटान, बर्मा , थाइल्याण्डमा रहेका नेपालीभाषीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी भानु जयन्ती मनाइरहेका छन् ।...
नयाँ दिल्ली । नवजोत सिंह सिद्धूले पन्जाव मन्त्री परिषदको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । काँग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई एक चिठ्ठी लेख्दै मन्त्री सिद्धूले राजीनामा दिएको बताएका हुन् । उनले आफ्नो ट्वीटर ...
पहिरो: तम्घास- सन्धिखर्क सडक खण्ड अवरुद्ध
बुटवल । पाँच दिनदेखिको निरन्त बर्षाको कारण पहिरो जाँदा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासदेखि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क पुग्ने सडक शनिबार बिहान ७ बजे देखि अवरुद्ध भएको छ । तम्घास नेटा सडक खण्डको वेदुखर्कमा पहिरो...
फेसबुकलाई ५ खर्ब पचास अर्बको जरिवाना !
एजेन्सी । अमेरिकी नियामक निकायले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई साढे ५ खर्ब पचास अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ । फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको तथ्यांकको गोपनियता कायम राख्न नसकेको मु...
काठमाडौं । शहरको दु:ख गाउँले बुझ्दैन । गाउँको दु:ख शहरले । गाउँबाट शहर बसाईसरेका वा शहरमा परम्परागत जीवन बिताइरहेका मानिसहरुको आवश्यकता र सौखहरु पछिल्लो समय शहरमा अवस्थित सरकारी निकायलाई बोझ बन्दैछन...
न्युयोर्क शहरको बत्ति ५ घण्टा कहाँ गयो ?
एजेन्सी । गएराति अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर स्थित् म्यानहटन क्षेत्रमा बत्ती गएपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । बत्ती जाँदा त्यसबाट सो क्षेत्रका करिब ७० हजार मानिस प्रभावित भएका छन् । शहरको मेट्रो सेवा, लि...
मलेसियाको सडकमा दुई नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं । मलेसियास्थित शाहआलमको जलान कोटाकेमुनिङ मार्गमा सडक दुर्घटनामा परेर दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ ! डेराबाट मोटरसाइकलमा काम गर्ने पसलतर्फ जाने क्रममा कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ ढकनियाका ३...
एजेन्सी । आइसीसी विश्वकप क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ । न्युजिल्यान्ड र घरेलु टोली इंग्ल्यान्डबीच उपाधिको लागि 'क्रिकेटको घर' लर्ड्स, लण्डनमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । हालसम्म क्रिकेटको उपाधि उचाल्न न...
डोल्पामा जिप व्यवसायीले सर्वसाधारणसँग मनपरी भाडा असुलेका छन् । सदरमुकाम दुनैदेखि सुँपानीसम्म १३ किमि सडकमा यात्रा गरेको भाडा पाँच सय रुपैयाँ छ । यो सडकमा एक दर्जन जिप चल्छन् । हेलिकोप्टर र तुइनबाट ...
राजदूत प्याकुरेलले दिए राजीनामा
श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले परराष्ट्र प्रशासनप्रति चरम असन्तुष्टि देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्याकुरेलले परराष्ट्र कर्मचारी कामप्रति गम्भीर नरहेको र आफ्ना स्व...
राजधानीको पशुपति मन्दिर दर्शनका लागि पुगेकी एक वृद्धाले आफूमाथि सिरिन्ज आक्रमण भएको बताएपछि शनिवार त्यहाँ केहीबेर तनाव भयो । मन्दिर प्रवेशका लागि लाइन बस्ने एक वृद्धाले आफूमाथि तिखो वस्तुले घोचेको भन...
पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातसँग अख्तियारको आठ घन्टा बयान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसँग बयान लिएको छ । उनी बिहान कर्मचारी नआउँदै बिहान ९ बजे नै अख्तियार पुगेका थिए । शुक्रबार भएकाले कर्मचारी ४ बजे निस्किएका थि...
सडक अवरुद्ध, जनजीवन ठप्प
बाढीपहिरोमा परी दुई दिनमा देशका विभिन्न भागमा ३९ जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तीमा ३३ जना बेपत्ता भएका छन्। राजमार्ग डुबाउँदा र कतिपय पुल भत्काउँदा आवागमन अवरुद्ध भएको छ। समयमा राहत र उद्धार हुन नसक्दा पू...